हामी विको UPulse, एक राम्रो क्यामेरा र केहि उच्च मूल्य संग एक मोबाइल विश्लेषण ग्याजेट समाचार
विकोको जन्म २०११ मा मार्सल (फ्रान्स) मा भएको थियो। यी सबै बर्षहरूमा करीव countries० देशहरुमा फैलिएको छ र गत वर्ष मात्रै यसले १० करोड टर्मिनलहरू बिक्री गर्न सफल भयो।
कम्पनीको यसको क्याटलगमा फरक-फरक टर्मिनलहरू छन् र हामी धेरै विविध विकल्पहरू फेला पार्न सक्दछौं जुन प्राय: प्रवेश वा मध्यम दायरालाई जनाउँछ। पछिल्लोमा हामी हाम्रो नायक भेट्छौं: विको यूपुल्से जससँग हामीले अन्तिम हप्ताहरू उहाँलाई अझ राम्ररी चिन्न प्रयास गरेका छौं र तपाइँको प्रभाव पहिलो हात ल्याउनुहोस्। हामीले सुरु गर्नु अघि हामीले तपाईंलाई यो भन्नु पर्छ कि यस विको यूपीलेमा त्यहाँ प्रकाश र छाया छ। र हामी अनुमान लगाउँदछौं कि यसमा क्यामेरा भनेको सुविधा सबैभन्दा बाहिर यसको क्यामेरा हो। तर तपाइँ अधिक जानकारी दिन जारी राख्न
2 शक्ति र मेमोरी
3 विको UPulse क्यामेरा: सम्भवतः सम्पूर्ण भन्दा राम्रो
4 अपरेटिंग प्रणाली र जडानहरू
6 मूल्य र सम्पादकको विचार
7 विको UPulse को पेशेवर र विपक्ष
विको uPulse दुई दायरा बीच चल्छ: कम र मध्यम। र तपाइँको ध्यानाकर्षण गर्ने पहिलो चीज यसको रूप कारक हो र फ्रान्सेली कम्पनीले कडा प्लास्टिक वा पोली कार्बोनेटको सट्टा धातुको चेसिसमा शर्त लिने निर्णय गरेको छ। साथै, यसको स्क्रिनमा पुग्छ .5,5..XNUMX इन्च विकर्ण, यद्यपि केवल HD रिजोलुसन प्राप्त गर्दै (१,२1.280० x p२० पिक्सेल) कम्पनीका अनुसार यस प्यानलले n०० नाइटको चमक प्रस्ताव गर्दछ, जबकि बाहिर हामीले हेरेका थियौं कि हामीले देखाइएको सामग्रीलाई राम्रोसँग छुट्याउन केही हदसम्म उच्च स्तरमा शर्त लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब, यो सत्य पनि छ कि यस स्क्रिन आकारको साथ प्रयोगकर्ताले कम स्क्रोल गर्नुपर्नेछ र अधिक आरामसँग पढ्न सक्नुहुनेछ साथै सभ्य भिडियोहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
पछाडिको आवरणमा एक विचित्रता छ र यो यो हटाउन सकिन्छ। कारण सरल छ: विकोले चेसिसको छेउमा भएको सिम र मेमोरी कार्ड विस्तार स्लटको लागि रोजेको छैन र तिनीहरूलाई ब्याट्रीको छेउमा राख्न चाहान्छ। अर्कोतर्फ, पछिल्लो हटाउन योग्य छैन, डाटा जुन हामीले नकरात्मक बनाएका छौं। बाँकीका लागि यो तपाईको हातमा बोक्नु आरामदायक मोबाइल हो। र प्रयोग गरिएको सामग्रीलाई धन्यवाद, यसले प्रतिरोधी महसुस गर्दछ।
शक्ति र मेमोरी
विको UPulse एक भित्र ले T-कोर प्रोसेसर MediaTek द्वारा हस्ताक्षर गरिएको। सहि मोडेल MTK6737 हो जुनसँग १.1,3 GHz को आवृत्ति रहेको छ।
यो चिपमा हामीले एउटा थप्नु पर्छ GB जीबी र्याम र GB२ जीबी आन्तरिक स्पेस दिमागमा आएको सबै चीजहरू बचत गर्न। यी तथ्या With्कहरूको साथ हामी तपाईलाई विश्वस्त गराउन सक्छौं कि दैनिक कार्यहरू कुनै समस्या बिना र पर्याप्त प्रवाहका साथ गरिन्छ। यसबाहेक, पृष्ठभूमिमा खुल्ला बिभिन्न अनुप्रयोगहरू चल्दा फ्रान्सेली स्मार्टफोनलाई गडबड गर्दैन।
अब हामीले केहि खेलहरू परीक्षण गरेका छौं र सत्य यो हो उपकरण यस उद्देश्यका लागि डिजाइन गरिएको छैन। त्यो हो, यो यस अर्थमा हुन्छ जहाँ हामी अधिकतम प्रोसेसरको पहिचान गर्छौं जुन यो भित्र छ। तर हामी दोहोर्याउँदछौं कि यस पक्ष बाहिर, विको UPulse एकदम राम्रो र सहज रूपमा काम गर्दछ।
हामीले पहिले नै सूचित गरिसकेका छौं, पछाडि कभर उठाउँदा तपाईं ढाँचामा मेमोरी कार्ड घुसाउन सक्षम हुनुहुनेछ माइक्रोएसडी जुन अधिकतम १२128 जीबीको स्थानमा पुग्छ.
विको UPulse क्यामेरा: सम्भवतः सम्पूर्ण भन्दा राम्रो
हामी टर्मिनलको साथ यो क्यामेराको सबैभन्दा खराब भागबाट सुरु गर्नेछौं। र यो भिडियो रेकर्डि part अंशमा छ: तपाईं केवल p२०p (HD) को अधिकतम रिजोलुसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो निर्णय गर्दा शायद एक बाधा हुन सक्छ। र यो यो हो कि फ्रान्सेली कम्पनीले यो रिजोलुसनलाई एक कदम अगाडी बढाउने र मध्य-दायराको झनै नजिक हुने सोचेको थियो। जहाँसम्म, यो बाहिर खडा छ १ me मेगापिक्सेल रिजोलुसन फोटो क्यामेरा फोटोग्राफरमा छविहरू क्याप्चर गर्दैछ। यो सत्य हो कि कम प्रकाश अवस्थामा भन्दा क्यामेराले राम्रो प्रकाश भएका स्थानहरूमा राम्रो प्रदर्शन गर्दछ। तर यो अन्तिम अर्थ मा यो प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा भन्दा धेरै व्यवहार गर्दछ; त्यहाँ प्रविष्टि-स्तर टर्मिनलहरू छन् जसमा राती फोटोहरूमा आवाज धेरै छ कि सबै विवरणहरू छोडियो।
त्यस्तै गरी, विको UPulse को क्यामेरासँग "सुपर पिक्सेल" मोड छ त्यो 52२ मेगापिक्सलको रिजोलुसनको स्नापशटहरू हुन्छन् र जसमा उच्च डिग्री प्राप्त हुन्छ यदि हामी तिनीहरूलाई जूम गर्छौं भने। त्यस्तै, यस विको टर्मिनलको फोटोग्राफी अनुप्रयोगले तपाईंलाई अधिक कलात्मक समाप्तको लागि विभिन्न फिल्टरहरू लागू गर्न अनुमति दिन्छ।
अगाडि हामीसँग क्यामेरा पनि हुनेछ (Me मेगापिक्सल रिजोलुसन) र यसले हामीलाई भिडियो कल गर्न वा एक अर्कामा लिन अनुमति दिनेछ।
हामी एकको सामना गरिरहेका छौं डुअल सिम स्लटको साथ उपकरण, ताकि तपाईं यो उपकरणमा दुई फोन नम्बरहरू बोक्न सक्नुहुनेछ। हामीले तपाईंलाई यो पनि भन्नु पर्छ कि विकोसँग यसको उपभोक्ताहरूसँग विस्तृत विवरण छ र त्यो यो हो कि यसले सिम एडेप्टरहरू प्रदान गर्दछ ताकि एक पटक उपकरण तपाईंको हातमा पुग्दा तपाईं पहिलो क्षणदेखि नै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी, र बजारमा सबै जसो स्मार्टफोनहरूमा, विको यूपुलस एन्ड्रोइडमा आधारित छ, अधिक विशेष रूपमा Android 7.0 Nougat। र यद्यपि यो बजारमा पछिल्लो संस्करण होईन, यो मान्नु पर्दछ कि धेरै संस्करणहरू धेरै विकल्पमा पछि पछाडि छोडेका छैनन्।
विकोले कस्टम प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस प्रयोग गर्दछ - विकोआईआईको नामकरण गरिएको छ। यसको अपरेशन सहि छ, तर यस सम्बन्धमा तरलताको अनुभवको लागि शुद्ध एन्ड्रोइड जस्तो केही छैन। अब, हामी तपाईंलाई यो पनि भन्नुपर्दछ यो एक नराम्रो अनुकूलन होईन.
जडानहरूको सम्बन्धमा, यो टर्मिनल हो LTE को साथ उपयुक्त (4G); योसँग वाइफाइ, ब्लुटुथ 4.0.०, GPS र mm.mm एमएम अडियो ज्याक छ। तपाईं पनि हुनेछ एफएम रेडियो ट्यूनर। हो, ठीक, तपाईं रेडियो स्टेशनहरूमा ट्यून गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको डाटा रेटको सहारा बिना।
अन्तमा, तपाइँलाई भन्नुहोस् विको UPulse को पछाडि हामीसंग फिंगरप्रिन्ट रिडर हुनेछ। यसले हामीलाई टर्मिनल अनलक गर्न साथै अनुप्रयोगहरू सुरूवात गर्न मद्दत गर्दछ; यसमा आफ्नो औंला राख्दा उपकरण निष्क्रिय हुन्छ टर्मिनल अनलक र अनुप्रयोग सुरू गर्दछ।
विक्रो UPulse सँगसँगै आएका ब्याट्रीसँगaछ १,3.000,००० मिलिअम्प क्षमता। कम्पनी डेटाका अनुसार यसले हामीलाई समस्या बिना पूर्ण दिनको स्वायत्तता प्रदान गर्दछ। हाम्रो परीक्षणमा हामीले हासिल गरेका छौं and र hours घण्टाको स्क्रिनको बीचमा। जे होस्, सावधान रहनुहोस्, सँधै जस्तै, तथ्या्कहरू प्रयोगमा निर्भर गर्दछ जुन प्रत्येक प्रयोगकर्ताले उनीहरूको एकाईको बनाउँछ।
मूल्य र सम्पादकको विचार
विको UPulse एक मोबाइल हो जुन सबै प्रकारका प्रयोगकर्ताहरूमा केन्द्रित छ। अब, निर्माताले संकेत गर्दछ कि यसको लक्षित दर्शक सबैभन्दा कान्छो छ। एक हो स्मार्टफोन सबै दैनिक कार्यहरूमा सजिलोसँग कार्य गर्न सक्षम: वेब ब्राउजि,, सामाजिक नेटवर्कहरू, जानुहोस् वा ईमेल प्रबन्धनमा अफिस ऑटोमेसन कागजात सम्पादन गर्नुहोस्। यद्यपि Google प्लेबाट भिडियो गेमहरू खेल्नको लागि तपाईले अधिक शक्ति माग्ने बित्तिकै, यो तपाइँ नै सब भन्दा लि l्गो पार्नुहुन्छ.
यो राम्रो निर्माण हो र लिगमा उसले खेल्दा उसको क्यामेरा आश्चर्यचकित हुन्छ। ठीक छयसको लगभग १ 180० यूरोको मूल्यले हामीलाई श in्कामा पुर्‍याउन सक्छ; यो धेरै सम्भव छ कि तपाईं समान मूल्यको लागि उपकरणहरू फेला पार्नुहुनेछ। र सबै भन्दा माथि, कि यो अधिक शक्तिशाली पक्षहरूमा राम्रो प्रदर्शन प्रदान गर्दछ फूर्ज।
विको UPulse को पेशेवर र विपक्ष
एन्ड्रोइड N नौगट स्थापना भयो
यो NFC छैन
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » हामी विको UPulse, एक राम्रो क्यामेरा र केही उच्च मूल्य संग एक मोबाइल विश्लेषण